အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဇွန်လ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဇွန်လ ၂၀၁၄
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဇွန်လ ၂၀၁၄
Posted by kai on May 15, 2014 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 13 comments
အိုဘားမား၏စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုအောက်ဝယ် အမေရိကန်တို့ စီးပွားအကြပ်အတည်းမှလွတ်ထွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရက်တို့၏ ခေတ်အဆက်ဆက် အိပ်မက်ကြီးတခုဖြစ်သော အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်သစ်ကို ဥပဒေပြုအကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ခဲ့လေသည်။
အမေရိက၏ဒီမိုကရက်တို့ သမိုင်းမျက်နှာသစ် ဖွင့်ခဲ့သည်ဆိုရပေမည်။ ယခုလာမည့်နိုဝင်ဘာလသည် ယူအက်စ်၏အရေးကြီးရွေးကောက်ပွဲရာသီဖြစ်ပါသည်။ အိုဘားမား၏အုပ်ချုပ်လုပ်ဆောင်မှုတို့ မှန်/မှားသည်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးစနစ်တွင် မှားသည်မှန်သည်ဟူသည်သေးသိမ်လျှက် များသည်နည်းသည်ကသာ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်နေဟန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံ့မဏ္ဍိုင်ကြီး၃ရပ်တွင် ဒီမိုကရက်တို့အသာစီးယူထားမှု အဆုံးသတ်မည်လော။ ပြောင်းပြန်လှန်မည်လေ၊ ရီပါဗလစ်ကန်င်နှင့် ပါဝါချိန်ခွင်လျှာညီလာမည်လော မျက်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိလေသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ ယခုလနှင့်နောက်နောင်လတို့သည် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြရသည့် ရာသီဖြစ်ပါသတည်း။
Searching Fire (ပစ်ရှာ)
ယခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည်လည်းလာမည်/ရှိမည်ဆိုသည်။ ပမာဏများသောရွေးချယ်/ပြောင်းလဲမှုကား ဖြစ်မည်မဟုတ်၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းပြည်မဏ္ဍိုင်အားလုံးတို့တွင် အာဏာခေါင်းကိုင်ထားသူတို့သည် စစ်ဂိုဏ်းသားများသာဖြင့်သဖြင့် ယခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် အားစမ်းသည့်သဘောနှင့်လုပ်သည်ဟု အတိအကျဆိုနိုင်သည်။
စစ်တပ်၏ လက်သုံးစကားကြီးတခွန်းဖြင့် ဆိုရသော် Searching Fire သာတည်း။ သို့ဖြင့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက် မည်သူကိုဖြုတ်၍ မည်သည်ကိုထုတ်ကာ မည်သို့ဇတ်လမ်းဆင်-ဆွဲယူရမည်ကို မဟာဗျူဟာချကြမည့်ဟန်ရှိသည်။
အထူးဤမျှ ၁၂လ၀ယ်၊ ရွာထပ်ပစ္စုန်မရွာတုံသော်
ထို့ ကြောင့်ဖြစ်၏၊ ကျမ်းစစ်ကျမ်းမှ အဟောတည်း။ ။
ရှေး ၁၂-လရာသီမိုးဘွဲ့၏အဆုံးနိဂုံးတွင်ထိုသို့တွဲလျှက်ပါသည်ကို ဖတ်ဖူးမှတ်ခဲ့ဖူးသည်။
ဥတုရာသီဖောက်ပြန်သော် တာဝန်ရှိသူများမှာ မင်းသား၊ရဟန်းတို့ဖြစ်သည်ဟု တိကျစွာဆိုထားခြင်းဖြစ်လေသည်။
ထိုဘွဲ့ကိုထပ်သောနှစ်တို့သည် သက်ဦးဆံပိုင်မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ် ဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟူသည်သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်ခေတ်အား တောင်ရှည်ချွတ်ကာ ဘောင်းဘီစွပ်၍ထားသည်နှင့် သဘောတူညီသည်ဟုဆိုချင်သည်။ သို့ပါ၍ထိုထိုခေတ်တို့တွင် ဥတုရာသီဖေါက်ပြန်ခဲ့သော် ဦးပိုင်၊အာဏာရှင်တို့တာဝန်သာဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းစစ်ကျမ်းမှန်တို့ကဆိုသည့်သဘောဖြစ်၏။
သို့ဆိုသော် ယခု၂၁ရာစုတွင် မိုးခေါင်ရေလျှံ ဥတုရာသီဖေါက်ပြန်မှုကြီးစွသော ပြည်မြန်မာဝယ် တာဝန်ရှိ၊တာဝန်ယူရမည့်သူတို့မှာ အဘယ်သူတို့နည်း။
တွေးကြည့်ရန်ရှိပါ၏။ ယခုခေတ်ကာလကြီးတွင် ဥတုရာသီသည် လူကိုသာမှီပါသတည်း။
မြန်မာ့ရာဇ၀င်တွင်အဆိုးရွားဆုံးသော သဘာဝဘေးရန်ကြီးဖြစ်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် ၂၀၀၈ခုနှစ်မေလ ၂ရက်နေ့တွင်မြန်မာပြည်သို့ဝင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ထိုလ ၁၀ရက်နေ့တွင်ပင် မြန်မာပြည်နောင်ရေးအဆုံးအဖြတ်ချရမည် အခြေခံဥပဒေကို (လူထုထံမှမဲကောက်ယူပါသည်ဆိုကာ) ပြဌာန်းသည်။
“နာဂစ်အချက် မြန်မာအခက်”ဖြစ်သတည်း။ မြန်မာလူထု မိအေး၂ခါနာပါသည်။
စစ်ဂိုဏ်းသားတို့သည် အမျိုးဘာသာသာသနာအသံနှင့် ထိမ်းကြောင်းလျှင်ရလွယ်သော မြန်မာ့လူထုသဘော နောကြေနေပေဟန်ရှိသည်။ ထိုထိုနှင့် ခေတ်အဆက်ဆက်နှိမ်ခဲ့ ကျိန်ခဲ့သော အင်အား၅သိန်းမျှ ဘုန်းကြီးထုကို ဆရာ-ဒကာစစ်ဆင်ရေးဆင်ကာ အသုံးချခဲ့သည်။ လက်အုပ်တချီချီလူကြီး(ဆိုသူ)များကို သတင်းစာ၊တီဗီတို့တွင်အတွေ့ရစိတ်လာသည်။
ထို့နောက် ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးနှင့်ရောသမစပ်ကာ စေလိုရာစေတော့သည်။ ဤမိုးဤမုန်တိုင်းသည် လူထုကိုမှားယွင်းသော အနာဂတ်ဆီခေါ်သွားမည်မှာ သေချာ၏။
လူမျိုး ၁၃၅ပါးနှင့် ဘာသာစကား ရာကျော်တွင် သာသနာကြီး၎ရပ် နှစ်ရာချီအထိုင်ကျနေသောပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဝယ် အင်အားကြီးသူတို့က မိမိတို့အမျိုးဘာသာသာသနာကို ဘုံတင်မြှောက်ကာ အခြားတပါးနှင့်တွန်းတိုက်ကြသည်ရှိသော် ပြည်ထောင်စုမှ ကွဲကြပြဲကြရန်သာရှိသည်ကို လူပြိန်းတွေးနှင့်ပင် သိနိုင်မိနိုင်သည်။
လူမျိုး၁၃၅ပါးကိုယ်စီက အမျိုးဘာသာသာသနာသာ ဦးထိပ်တင်ကြပါလျှင် မြန်မာပြည်သည် ခွဲမဆုံးပေါင်ပြည်တစ်ထောင်ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။
Divide and Rule ဟူသည်ရှိ၏။ မိအေးထံတွင် ဘီလူးကိုယ်ဝန်တည်လေပြီ။
၈၈အရေးတော်ပုံကို ၈၈ကျောင်းသားတို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၈၈မှလွန်၍ ၂၀၁၄ရောက်သော် ဦးဆောင်မှုတို့၌ ပေါ်လစီတိတိကျကျထားရှိကာ ဦးဆောင်မှုပြုကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
အမေရိကလိုဖြစ်ချင်သလား၊ ရုရှားလိုဖြစ်ချင်သလား၊ အိန္ဒိယလိုဖြစ်ချင်တလား၊ စိန(ချိုင်းနား)ပြည်လိုဖြစ်ချင်သလားဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှမိန့်ခွန်းဖြင့် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သလို လူထုကိုမေးခွန်းထုတ်ကြစေချင်သည်။
လက်ဝဲလော၊လက်ယာလော၊ အလယ်လက်ဝဲလော၊ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်လော၊ မည်သည့်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ယုံကြည်သလဲ၊ Think Tank အဖြစ်သာနေမည်လား စသဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ဆက်ရင်း ဦးဆောင်မှုပေးသင့်လှပေသည်။
သို့မှသာ ခေါင်းဆောင်တို့အပေါ် ယုံကြည်အားကိုးမှုရှိသော နောက်မှညီညာဖျဖျလိုက်လာမည့် ပြည်သူလူထုကိုရမည်။
တိကျသော လမ်းရွေးပြပါလျှင် စူပါပါဝါအမေရိကအစိုးရကို တွန်းအားပေးနိုင်သည့် ၃သိန်းမျှသော မြန်မာ-အမေရိကန်တို့၏ ဖြည့်ကူအင်အားကိုလည်းရရန်ရှိသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားနေ ၅သန်းအထက်သော မြန်မာတို့၏ အဖြည့်အင်အားလည်းရမည်သေချာသည်။
အိမ်နီးချင်း အင်အားကြီး အိန္ဒိယ၊စိနပြည်မှအကူများလည်းစိမ့်ဝင်နိုင်ပါသည်။ တိုင်းပြည်တို့မည်သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့အား ရွေးချယ်ခွင့်ကားမရှိ၊
ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသူများနှင့်ညှိကာ အခြေကောင်းများဖန်တီး၍ယူသင့်သည်။ တကယ်တော့ ငွေသည် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဆောင်ယူနိုင်ပါ၏။ ယခုသည်ပင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်အောက်တွင် အင်္ဂလန်၊ဥရောပ အမေရိကတို့မှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ စီးဆင်းဝင်လျှက်ရှိနေပေပြီ။
သို့ဆိုရသော် လူထုတွင် ငွေရှိသည်၊ အကူရှိပြီ။ အင်အားခိုင်သည်။ ခေါင်းဆောင်တို့လည်း အတွေ့အကြုံတို့ရင့်ကျက်ခဲ့ပြီ။ ဘာကိုလို၍စောင့်နေသနည်း။
ဒီအတိုင်းသာစောင့်ကြည့်နေကြပါလျှင် မိအေးဗိုက်မှ ဘီလူးမွေးလာတော့မည်။
ရွေးကောက်ပွဲတခုနီးလာပြီ။ စစ်ဂိုဏ်းမှလာသော စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပရိုပဂမ်ဒါတိုင်းကို ရေလိုက်ငါးလိုက်မျောမနေ ကြားမနေပဲ ရည်ရွယ်အကြောင်းရင်းတရားရှာကာ ပြောင်းပြန်အကျိုးယူသင့်လှသည်။ “သူ”ဒါရည်ရွယ်လျှင် “ငါ”ဟိုဟာဖြစ်အောင်လုပ်ကြသင့်သည် ဟူလို။
ဘယ်လောက် မ အ ဘူး ပြောပြော….
ဘာမျိုးဟေ့ ဘယ်လောက် တော်တာ ပြောပြော….
ဘယ်လောက် ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တာတွေပဲ ပြောပြော…..
ဒီ ဟာဂျီးတွေနဲ့ ပတ်သက်သမျှ မဲပေးမဲ့သူတွေ များနေသရွေ့ကတော့……
သို့သော် မှိုင်းမိသွားကြလျှင်တော့ မပြောတတ်
စောင့်ကြည့်လျှင် သိမည် ဟုသာ….
တောက်တုံးမကျတဲ့ အစိုးရနဲ့ပဲ အသားကျနေတော့လည်း
ဒီ တောက်တုံး မကျတဲ့ လူဂျီးတွေကို တောက်တုံးမကျမှန်းမသိတော့ပဲ
မဲပေးမိလို့ကတော့ တောက်တုံးမကျတဲ့ နိုင်ငံကြီးသို့ ချီတက်ကြစို့။
အဲ့လို အသုံးမကျအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြု ပြင်ပေးလာတော့လဲ
အသုံးမကျတာကို အသုံးမကျမှန်း သိတဲ့သူက အများကြီး ရှိပါဦးမလား
တတိယအကြိမ် လိမ်ရန်အားယူနေကြပေပြီ…သတိဆောင်၍ မောင်းကျေးနင်းခတ်ကြလေလော့…
ဟိုနေ့ကတက်လာတဲ့..“ ကြွေးကြော်နေရုံမျှနဲ့ မလုံလောက်နိုင်ပေ” – padonmar ပို့စ်မျိုး..
– ကြောင်ဝတုတ် ရေးတဲ့ “လူ…” ပို့စ်မျိုး..များများရေးနိုင်ကြပါစေ….
အဘဖေါ ဆိုသူရေးသောပို့စ်များလည်း များစွာအကျိုးပြုပါကြောင်း……
ကိုရီးယားကား IRIS ကိုကြည့်ပီးနောက် နားလည်လာတာက မြန်မာပြည်မှာလည်း IRIS လိုမျိုး အဖွဲ့ တွေ မရှိဖူးလို့ မပြောနိုင်ဖူး….
IRIS ကတော့ လက်နက်ပေါ့ဗျာ…
မြန်မာပြည်ကတော့ တခြား ဟာတွေ ရှိမှာပေါ့….
လိုရင်းကတော့ ပြည်ပ အနှောင့်အယှက်တော်တော်ဝင်တာပဲ….
ပြည်သူတွေနားလည်ပါပီတဲ့… ပြည်သူလိုချင်တာက သူတို့ လိုချင်တဲ့ အဖြေမဟုတ်ရင် ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ….
လူတွေမှာ အဲ့အကြောက်တရားကြီးက၀င်လို့ ……
ဘယ်လိုပဲ စဉ်းစားစဉ်းစား ၂၀၁၅ ဟာလည်း…. သူတို့ အတွက်ပဲလို့ထင်မြင်ပါကြောင်း…..
နာဂစ် အခြေခံဥပဒေနဲ့ တဂစ်ဂစ် အော်မြည်ကာ စခန်းသွားကြပေရော့ 
သူတို့ လက်ကိုင်ထားသည်က. . .
ငါတို့ လုပ်ဟန် အားလုံးမှန်သည်. . .
ဝေဖန်သူများ ဖောက်ပြန်၏. . .တဲ့. . .
ရေရှည် ကို သာမန်ပြည်သူတွေက သိပ် မစဉ်းစားဘူး ဒါကို အသုံးချနေတာ နည်းဗျုဟာ နဲ့မဟုတ် မဟာဗျုဟာနဲ့ဆိုတော့ကာ..မင်းဘယ်ပြေးမလဲ မိအေး….
မပူပါနဲ့ ၁၉၉၀ စိတ်​မျိုးရှိပါ​သေးသဗျ အဲ့လာကျမှ အဲ့ဒုန်းကလို ရူးချင်​​ယောင်​​ဆောင်​​နေမှာပဲ စိုးရတာ
အခု မေလ ဘဲရှိသေးတာမဟုတ်လား။
ဘိုလိုဖစ်ပြီး ဇွန် သင်ပုန်းကို ချိတ်ထားတာတုန်း။
အချိန်တွေ မကစားပါနဲ့ သူကြီးမင်း။
ပြောပြန်ရင်လည်း မိဂီ လွန်တယ်ဖြစ်မယ်… အဲ့လူကြီးက အင်မတန် အပြောင်းအလဲများတာကလား..
ခါတိုင်းနှစ်တော့ .. ဘိုသံနဲ့ ဂျွန်လ ဆိုပီး ရေးတယ်.. သည်နှစ်တော့ …သွေးထဲက ငါးပိသံဇာတိပြတယ်ထင့်
ဇွန်လ တဲ့ …. မပြောချင်လို့ ကျိနေဒါကြာဘီ သဂျီး ..
မြန်မာစကားအသုံးတွေနဲံပါတ်သက်ပြီး.. ဇွန်လား.. ဂျွန်လား.. ရေးရင်းတော်တော်တွေးလိုက်ရသေးတယ်..
နောက်ဆုံးတော့.. ဂီဂီပြောသလို.. ငပိကြိုက်တဲ့ပါးစပ်..ငပိသံဇာတိပါတာပဲကောင်းပါတယ်.. ဆိုပြီး..။
.အားချင်း မမျှပါဘူး ….
.၀ိတ်တန်းချင်း မတူပါဘူး ….
.လက်ရည်ချင်းလဲ ကွာပါတယ် ….
.ဒီဖက်က လူတွေက ယောင်ခြောက်ဆယ်ပဲရှိသေးတယ်-
.ဟိုဖက်က တခြားအခင်းအကျင်းတွေထားလို့- သူ့ထမင်းသူစားတဲ့ စစ်တပ်တစ်ခု ထပ်ဖွဲ့ထားပြီးပြီ…။
.ဒါကြောင့် ၂၀၁၅ ဟာ ပြတ်ပြတ်သားသား အဖြေပေါ်ဖို့ မမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူး…။
.၁- အကုန်လမ်းပေါ်ထွက် – တော်လှန်ရေးစစ်စစ်လုပ်
.၂- ဒါမှမဟုတ် ကျုပ်တို့နိုင်ငံသားတွေ အင်မတန်ကျင့်သားရနေတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့-
. စောင့် ……………………………………….
ကျုပ်ကတော့ လူပျင်းတစ်ယောက်ပီပီ ဒုတိယလမ်းကို ရွေးတယ်။